Jobho anoenderera mberi achipindura (1-28)
‘Ndingatoda zvangu kutaura naMwari’ (3)
“Muri vanachiremba vasingabatsiri” (4)
“Ndinoziva kuti ndakarurama” (18)
Anobvunza kuti nei Mwari achimuona semuvengi (24)
13 “Chokwadi, ziso rangu rakaona zvese izvi,Nzeve yangu yakazvinzwa, ikazvinzwisisa. 2 Zvamunoziva imi, ini ndinozvizivawo;Handina kuderera kukupfuurai. 3 Ini ndingatoda zvangu kutaura neWemasimbaose pachake;Ndinoda kupindurana naMwari panyaya yangu.+ 4 Asi imi muri kundizora nhema;Mese muri vanachiremba vasingabatsiri.+ 5 Dai henyu mangoramba makanyarara kuti zii,Kuti munzi makachenjera.+ 6 Inzwaiwo zvandiri kutaura,Uye teererai kuteterera kwandiri kuita nemuromo wangu. 7 Muchataura zvisina kururama muchimiririra Mwari here,Uye muchataura zvekunyengera muchimumiririra here? 8 Muchava kurutivi rwake here,Muchaedza kumiririra Mwari wechokwadi panyaya yake here? 9 Kana akakuongororai zvinozokufambirai zvakanaka here?+ Muchamubata kumeso sezvamunoita munhu here? 10 Achatokutsiurai cheteKana mukaedza kuita zverusarura pachivande.+ 11 Kukudzwa kwake hakuzokutyisai here,Mobatwa nekumutya? 12 Mashoko enyu eungwaru* akaita sezvirevo zvemadota;Zvamunotaura muchiti hamuna mhosva zvakaita senhoo dzevhu. 13 Rambai makanyarara pamberi pangu, nditaure. Chauya pandiri ngachiuye! 14 Ndinoisireiko upenyu hwangu mungozi*Uye ndinobatireiko upenyu hwangu* mumaoko? 15 Kunyange dai aindiuraya, ndaingoramba ndakamirira;+Ndaizotaura nyaya yangu pamberi pake ndichipindurana naye. 16 Aibva ava ruponeso rwangu,+Nekuti hapana munhu asingadi Mwari* angauya pamberi pake.+ 17 Nyatsoteererai shoko rangu;Inzwai zvandiri kuzivisa. 18 Chionai zvino, ndagadzirira kuti nyaya yangu itongwe;Ndinoziva kuti ndakarurama. 19 Ndiani achakakavadzana neni? Kana ndikaramba ndakanyarara ndingafa!* 20 Ingondiitirai zvinhu zviviri chete, haiwa Mwari,*Kuti ndirege kukuhwandai musandione pamberi penyu: 21 Isai ruoko rwenyu runorema kure neni,Uye musaita kuti kutyisa kwenyu kundivhundutse.+ 22 Shevedzai uye ini ndichapindura,Kana kuti regai nditaure, imi mundipindure. 23 Ndakakanganisei uye ndakatadzei? Ndibudisirei pachena chitadzo changu nechivi changu. 24 Munovanzirei chiso chenyu+Muchinditora semuvengi wenyu?+ 25 Muchaedza kutyisidzira shizha riri kupeperetswa nemhepoKana kudzingirira mashanga akaoma here? 26 Nekuti munoramba muchinyora pasi mashoko anorwadza ekundipomera,Uye munoita kuti ndizvidavirire pazvivi zvandakaita ndichiri mudiki. 27 Munoisa tsoka dzangu muzvisungo zvematanda,*Munopenengura nzira dzangu dzese,Uye munotevedza tsoka yangu imwe neimwe. 28 Saka munhu* anoora sechinhu chinoparara,Sechipfeko chakadyiwa nezvitemamachira.*
^ Kana kuti “asingakanganwiki.”
^ ChiHeb., “Ndinotakurireiko nyama yangu nemazino angu?”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Kana aripo, ndicharamba ndakanyarara, ndofa.”
^ ChiHeb., “Musandiitira zvinhu zviviri chete.”
^ ChiHeb., “iye,” zvichida ndiJobho ari kutaurwa.